Wiase Nsɛm | Nyan! May 2014
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Bengali Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Finnish French Georgian German Greek Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Latvian Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Nepali Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tamil Thai Tigrinya Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Xhosa Zulu
Asia Apuei Fam
Wiase Nyinaa Adwumakuo a Ɛbɔ Mmoa Ho Ban de too dwa sɛ efi 1997 kosi 2011 no, nkurɔfo ahu mmoa ne nnua foforo pii; ebi ne ɔwɔ bi a n’ani yɛ kɔkɔɔ (Trimeresurus rubeus). Mmoa ne nnua foforo yi, wohui wɔ baabi a Mekong Asubɔnten no tene fa te sɛ Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam, ne Yunnan mantam no mu wɔ China. Afe 2011 nko ara no, wohuu mmoa ne nnua foforo; emu 82 yɛ nnua, 21 yɛ ɔwɔ ne nkoterɛ abusua, 13 yɛ nsuomnam, 5 yɛ nufuboa, ɛnna 5 yɛ mmoa a wotumi tena nsuom ne asase so.
Koowaa krataa bi kae sɛ, seesei nnipa a wɔtwe wɔn kɔ amannɔne yɛ “biribi a ɛha adwene paa wɔ Europe Aman Nkabom no mu.” (The Moscow Times) Wɔtwe wɔn kɔ saa a, wɔtɔn ebinom de wɔn si tuutuu ne ade; ebinom nso, wɔde wɔn kɔyɛ nkurutudwuma, na ebinom nso wɔ hɔ a, “wɔde wɔn fa sum ase koyiyi wɔn akwaa tɔn.” Deɛ akɔfa weinom nyinaa aba ne ohia, adwumasɛm ne mmaa a nkurɔfo sisi wɔn.
Animdefo de wɔn ani ato fam ahu sɛ, “deɛ ɛmma nkwadaa nka wɔn ho nkɔ nnipa mu” firi TV hwɛ bebrebe. Deɛ wohui no si deɛ wɔaka no so dua sɛ, TV so “dwumadi a ɛyɛ papa mpo no, enni sɛ nkwadaa hwɛ boro dɔnhwerew 1 anaa 2 da koro.”
Wohwɛ mu a, ɛreyɛ akɔyɛ sɛ “Alaskafoɔ nkuraaseɛ” nyinaa wɔ mpoano ne nsuano. Nkuraa no dodoɔ no ara nso, nsuo yiri fa wɔn na edidi kɔ wɔn nsase mu. Amanneɛbɔ kyerɛ sɛ ewiem tumi yɛ hye wɔ hɔ ma enti nsuo no ntumi nkyene ntɛm na abɔ wɔn ho ban. Enti sɛ nsuo tɔ a, ɛma nsuo yiri fa wɔn na edidi kɔ wɔn asase mu.
Nnipa abɔ ka bebree ahwehwɛ kwan a yɛbɛfa so anya anyinam ahoɔden a yɛrensɛe mframa, enti wɔtwe ahoɔden no bi firi mframa ne awia mu. Nanso enkosi aga. Ɔpanin paa a ɔda anyinam ahoɔden adwuma ano wɔ wiase nyinaa, Maria van der Hoeven, kyerɛkyerɛɛ mu sɛ, “ɛnnɛ mpo, ɔkwan a yɛfa so nya anyinam ahoɔden no, wohwɛ mu a efĩ a ɛde ba no te sɛ mfeɛ 20 a atwam no.”
Wiase Nsɛm—May 2014